Izindaba - Iqiniso ngokukhanya kwezemvelo nokukhiqizwa
Eminyakeni embalwa eyedlule, ezinye izinto ezinkulu zenzekile emkhakheni wobuhle obuluhlaza. Asigcini nje ngokufinyelela ezinkethweni eziningi zokunakekelwa kwesikhumba okuhlanzekile nokunganabuthi, ukunakekelwa kwezinwele nezimonyo, kepha futhi sibona nemikhiqizo isusa ukugxila kwabo ekwakheni imikhiqizo ephathekayo nokufakwa emaphaketheni, noma ngabe kungavuseleleka kabusha, kuvuseleleke noma kuvuseleleke kabusha okubolayo okubolayo.
Ngaphandle kwale ntuthuko, kusabonakala kunesithako esisodwa sezithako zobuhle, yize singesinye sezithako ezilimaza imvelo kakhulu: i-glitter. I-Glitter isetshenziswa kakhulu ezimonyweni nakwezipikili. Iphinde yaba isithako esithandwayo emikhiqizweni yethu yokugeza, izibuko zelanga nokunakekelwa komzimba, okusho ukuthi ekugcineni izongena ezindleleni zethu zamanzi futhi isiphathe njengoba isingena edamini. Iplanethi idale umonakalo omkhulu.
Ngenhlanhla, kunezinye izindlela ezingayilimazi imvelo. Yize singahle singabi nawo amaphathi eholide noma imikhosi yomculo esikhathini esizayo esibonwayo, manje yisikhathi esihle sokushintsha ezintweni zeplastiki. Ngezansi, uzothola i-flash guide efanele (kwesinye isikhathi inzima).
Kuze kube manje, siyazi ngokuphelele inkinga yomhlaba yokungcola kanye nemiphumela emibi yepulasitiki olwandle. Ngeshwa, i-glitter etholakala ebuhleni obujwayelekile nemikhiqizo yokunakekelwa komuntu yiyona eyimbangela.
“Ubukhazikhazi bendabuko empeleni buyimicroplastic, eyaziwa ngemiphumela yayo emibi emvelweni. Yipulasitiki elincanyana ngendlela eyisimanga, ”kusho umsunguli we-Aether Beauty nophinde abe yinhloko yomnyango wezocwaningo nokusimama kukaSephora uTiila Abbitt. “Lapho lezi zinhlayiya ezinhle zitholakala ezimonyweni, zimiselwe ukugeleza ngamapayipi ethu endle, zidlule kalula ohlelweni ngalunye lokuhlunga, bese ekugcineni zingena emizileni yethu yamanzi nasolwandle, ngaleyo ndlela kubhebhethekise inkinga ekhulayo yokungcoliswa kwemikrofayikhi. . ”
Futhi akugcini lapho. “Kuthatha izinkulungwane zeminyaka ukubola nokubola kwale microplastics. Iphutha ngokudla futhi idliwa yizinhlanzi, izinyoni kanye ne-plankton, ibhubhisa izibindi zayo, kuthinte indlela abaziphatha ngayo, futhi ekugcineni iholele ekufeni. . ” Kusho u-Abitt.
Lokho kusho, kubalulekile ukuthi imikhiqizo isuse i-glitter esekwe epulasitiki ekwakhiweni kwayo futhi iye ezinhlokweni eziqhubekayo. Faka i-flash ebolayo.
Njengoba isidingo sabathengi sokusimama nobuhle buqhubeka nokukhula, imikhiqizo iphendukela kuzithako eziluhlaza ukwenza imikhiqizo yabo ibukeke ngokwengeziwe. Ngokusho kuka-Aubri Thompson, isazi samakhemikhali sobuhle esihlanzekile nomsunguli weRebrand Skincare, kunezinhlobo ezimbili ze- “eco-friendly” glitter esetshenziswayo namuhla: ezitshalwe ezitshalweni nezamaminerali. Uthe: “Ukukhanya okutshalwe ezitshalweni kutholakala kuselulose noma kwezinye izinto ezingavuseleleka, khona-ke zingadaywa noma zifakwe umbala ukuze kuvezwe imiphumela emihle.” “Ukukhanya okuncike emaminerali kuvela kumaminerali e-mica. Banayo i-iridescent. Lezi zingagaywa noma zihlanganiswe endaweni yokucwaninga. ”
Kodwa-ke, lezi zindlela zendabuko ezikhanyayo azilungile neze kwiplanethi, futhi enye nenye indlela inenkinga yayo.
I-Mica ingenye yezinketho zamaminerali ezisetshenziswa kakhulu, kanti imboni engemuva kwayo imnyama kakhulu. UThompson uthe yize kunjalo, kungokwemvelo okungabangeli ukushuba komhlaba, kepha inqubo yezimayini ngemuva kwawo yinkqubo enamandla kakhulu enomlando omude wokuziphatha okungekho emthethweni, kubandakanya nokuqashwa kwabantwana. Yingakho imikhiqizo efana ne-Aether neLush iqala ukusebenzisa i-mica yokwenziwa noma i-synthetic fluorophlogopite. Le nto eyenziwe elebhu ithathwa njengephephile yiphaneli yochwepheshe bokubukeza izithako zezimonyo, futhi ihlanzekile futhi ikhanya kakhulu kune-mica yemvelo, ngakho-ke iya ngokuya ithandwa kakhulu.
Uma lo mkhiqizo usebenzisa i-mica yemvelo, funa (noma ubuze!) Ukuqinisekisa ukuthengwa kwayo okulungile. Bobabili u-Aether no-Beautycounter bathembisa ukuthola i-mica efanele uma besebenzisa izithako zemvelo, kanti lokhu kusebenza ngenkuthalo ukudala ushintsho oluhle embonini ye-mica. Kukhona nezinye izinketho zomthombo wamaminerali wokuziphatha, njenge-calcium calcium borosilicate ne-calcium aluminium borosilicate, enziwe ngama-flakes amancane engilazi aphephe ngeso lengubo enamanzi amaminerali futhi enziwa ngamaBrands anjengeRituel de Fille asetshenziswa kwizimonyo.
Uma kukhulunywa ngokukhazimula okususelwa ezitshalweni, izitshalo zivame ukusetshenziswa emikhiqizweni eningi “ebolayo ngokubola” kanye nemikhiqizo yejeli namuhla, futhi lesi simo siba nzima kakhulu. I-cellulose yayo ivame ukutholakala ezihlahleni zokhuni oluqinile njenge-eucalyptus, kepha, njengoba kuchaziwe uThompson, eminye kuphela yale mikhiqizo empeleni iyaboliseka ngokubola. Amapulasitiki amaningi asenenani elincane lepulasitiki, imvamisa efakwa njengombala nombala ocwebezelayo, futhi kumele ahlanganiswe ngomanyolo wezimboni ukuze abole ngokuphelele.
Uma kukhulunywa ngokukhazimula okubolayo okubolayo, ukuhlanza okuluhlaza noma ukumaketha okukhohlisayo kuvamile phakathi kwemikhiqizo yobuhle nabakhiqizi ukwenza imikhiqizo ibukeke ilunge kakhulu imvelo kunalokho okuyikho ngempela. “Empeleni, lena yinkinga enkulu embonini yethu,” kusho uRebecca Richards, isikhulu sezokuxhumana (empeleni) somkhiqizo we-flash obolayo okonakalayo u-BioGlitz. “Sihlangane nabakhiqizi abathi ngamanga bathi benza ubukhazikhazi obubolayo ukuthi bungabola, kodwa empeleni bakha ubukhazikhazi obubabazekayo ezimbonini. Lesi akusona isixazululo ngoba siyazi ukuthi i-glitter powder cishe ngeke ize ingene emkhakheni we-Compost field. ”
Yize i- "compostable" izwakala njengokukhetha okuhle ekuqaleni, idinga ukuthi oyigqokile aqoqe wonke amabala womkhiqizo asetshenzisiwe bese ewathumela ngaphandle-okuthile abalandeli be-flash abajwayelekile abakwazi ukukwenza. Ngaphezu kwalokho, njengoba u-Abbitt asho, inqubo yokwenza umquba izothatha izinyanga ezingaphezu kweziyisishiyagalolunye, futhi cishe akunakwenzeka ukuthola indawo engenza umquba noma yini ngalesi sikhathi.
“Sike sezwa nangezinkampani ezithile ezithi zidayisa izinto zokuhlobisa zangempela ezibolayo, kepha bazixube nezinto zokucwebezela zepulasitiki ukunciphisa izindleko, nezinkampani eziqeqesha abasebenzi bazo ukuthi bachaze izinto zabo ezicwebezelayo njengezinto“ ezincibilika ”. Ukudida ngamabomu amakhasimende okungenzeka ukuthi awazi ukuthi “Yonke ipulasitiki iyalulazeka, okusho ukuthi izokwehla ibe izingcezu ezincane zepulasitiki. “Kunezele uRichards.
Ngemuva kokuxhumana nezindaba zemikhiqizo eminingi, ngamangala ukuthola ukuthi inketho ethandwa kakhulu empeleni iqukethe inani elincane lepulasitiki futhi kuphela okuqala kuqala ohlwini "lomkhiqizo ocwebezelayo ongcono kakhulu", kepha la mapulasitiki Akavamile ukuthengiswa. Zifihliswe njengokudla okubolayo, ezinye zize zizifihle njengemikhiqizo engenapulasitiki.
Kodwa-ke, uphawu alubi nephutha ngaso sonke isikhathi. UThompson uthe: "Ezimweni eziningi, lokhu kubangelwa ukungabi nalwazi kunokuba nobungozi." “Imikhiqizo idlulisela imininingwane kumakhasimende ayo, kepha imikhiqizo ngokuvamile ayikwazi ukubona umsuka nokucutshungulwa kwempahla eluhlaza. Le yinkinga kuyo yonke imboni kuze kube yilapho uphawu Lungaxazululwa kuphela lapho abahlinzeki kudingeka ukuthi banikele ngokusobala okuphelele. Njengabathengi, okungcono kakhulu esingakwenza ukufuna izitifiketi nemikhiqizo yama-imeyili ukuthola eminye imininingwane. ”
Umkhiqizo owodwa ongawethemba ku-biodegrade uqobo yi-BioGlitz. Ukukhazimula kwayo kuvela kumkhiqizi we-Bioglitter. Ngokusho kukaRichards, lo mkhiqizo njengamanje uwukuphela kokucwebezela okubolayo okubolayo emhlabeni. I-eucalyptus cellulose evunwa ngokuqinile icindezelwa kwifilimu, idayiwe ngemibala yezimonyo zemvelo, bese isikwa ngokunembile ngosayizi wezinhlayiya ezahlukahlukene. Eminye imikhiqizo yezintandokazi ezitshalwe ezitshalweni ezibolayo ngokuphelele (yize kungacaci ukuthi kufanele kusetshenziswe i-Bioglitter) ifaka i-EcoStardust ne-Sunshine & Sparkle.
Ngakho-ke uma kukhulunywa ngazo zonke ezinye izindlela ze-flash, iyiphi inketho engcono kunazo zonke? URichards ugcizelele wathi: "Uma kubhekwa izixazululo ezisimeme, into ebaluleke kakhulu ukubheka yonke inqubo yokukhiqiza, hhayi umphumela wokugcina kuphela." Unalokhu engqondweni, sicela uveze obala ngemikhuba yakho futhi ukwazi ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yabo iyatholakala. Thenga lapho ukuthola imikhiqizo ebolayo. Ezweni lapho kulula khona ukulandela umthwalo wemfanelo ngezinkundla zokuxhumana, kufanele sikhulume ngezinkathazo nezimfuno zethu. “Yize kuwumsebenzi onzima ukuthola ukuthi yimiphi imikhiqizo empeleni engenabungozi emhlabeni wethu, kunokumane ufune imikhiqizo engeyona yezinjongo zokumaketha, sinxusa bonke abathengi abanelukuluku nabanakekelayo ukuthi bafunde ngokujulile izinkampani abazixhasayo, babuze imibuzo, futhi ungalokothi uthembe izimangalo zokusimama ebusweni. ”
Ekugcineni, into ebaluleke kakhulu ukuthi njengabathengi, asisasebenzisi izinto zendabuko zeplastiki, futhi kufanele sinake nenani lemikhiqizo esivame ukuyithenga. UThompson uthe: "Ngicabanga ukuthi indlela engcono kakhulu ukuzibuza ukuthi imiphi imikhiqizo edinga ukuqukatha okucwebezelayo nokubenyezelayo." “Impela kunemikhiqizo engeke ifane ngaphandle kwayo! Kepha ukunciphisa ukusetshenziswa kunanoma isiphi isici sempilo yethu. Intuthuko esimeme kakhulu engafinyelelwa. ”
Ngezansi, umkhiqizo wethu oyintandokazi we-spark ongawethemba kungukukhetha okungcono futhi okuhlakaniphile kweplanethi yethu.
Uma ufuna ukuvuselela imvelo yakho kepha uzizwe unganqumi, i-BioGlitz's Explorer Pack ingahlangabezana nezidingo zakho. Lesi sethi siqukethe amabhodlela amahlanu e-glitter eucalyptus cellulose glitter engenamapulasitiki ngemibala nosayizi ohlukile, efanelekile ukusetshenziswa noma kuphi esikhunjeni. Mane unamathele ku-algae-based Glitz Glu noma esinye isisekelo osithandayo. Amathuba awapheli!
URituel de Fille, uphawu lwezimonyo ezihlanzayo, akakaze asebenzise ubucwebe obusekelwe kupulasitiki kuma-candies alo e-otherworldly, esikhundleni sokukhetha i-shimmer esekwe ngamaminerali etholakala engilazini ye-borosilicate eye-eye ne-synthetic mica. I-soot globe soot enhle kakhulu ingasetshenziswa ukwengeza izinhlansi zombala kunoma iyiphi ingxenye yobuso (hhayi amehlo kuphela).
Kusukela ngo-2017, i-EcoStardust ese-UK ibilokhu ikhiqiza izingxube zohlobo lwe-glitter-based glitter blends, ezisuselwa ezihlahleni zika-eucalyptus ezikhuliswe kahle. Uchungechunge lwayo lwakamuva, iPure ne-Opal, alinawo u-100% wepulasitiki, futhi seluhlolwe ukuthi lungaboliseka ngokuphelele emanzini asemasha, nokuyinto enzima kakhulu ukwakheka kwe-biodegrade. Yize imikhiqizo yayo emidala iqukethe ipulasitiki engama-92% kuphela, isengaba yinto ebolayo (yize kungenjalo ngokuphelele) ebolayo emvelweni wemvelo.
Kulabo abafuna ukubenyezela kancane ngaphandle kokusebenzisa ngokweqile, ngicela ubheke lokhu kucwebezela okucashile futhi okuthophayo okuvame kakhulu okuthinta umlomo okuvela e-Beautycounter. Umkhiqizo awutholi kuphela i-mica enesibopho kusuka ezintweni ezibenyezelayo ezisuselwa epulasitiki kuyo yonke imikhiqizo yawo, kodwa futhi ulwela ngenkuthalo ukwenza imboni ye-mica ibe yindawo esobala nenokuziphatha.
Noma ungakuthandi ukucwazimula, ungakhululeka kubhavu ocwebezelayo. Vele, njengosinki wethu, ubhavu wethu ubuyela ngqo emanzini, ngakho-ke kubalulekile ukukhumbula uhlobo lomkhiqizo esiwucwilisa usuku lonke. I-Lush inika umkhiqizo isicwebezelisi se-mica yokwenziwa ne-borosilicate esikhundleni sokucwebezela kwe-mica yemvelo ne-gloss plastic, ukuze ukwazi ukuphefumula kalula ngoba uyazi ukuthi isikhathi sokugeza asigcini nje ngokuvikela imvelo, kepha futhi sinokuziphatha okuhle.
Ufuna i-glitter ebushelelezi, hhayi i-glitter dwarf? Isikhanyisi se-Aether Beauty sikaSupernova asihlonipheki. Ipeni lisebenzisa i-mica yokuziphatha futhi idayimane eliphukile eliphukile ukukhipha ukukhanya kwegolide komhlaba.
Ekugcineni, into eyenza uhlelo lokusebenza lwe-sunscreen lube mnandi! Lesi sivikelo selanga esingangeni manzi se-SPF 30+ sifakwa ama-botanicals anomsoco, ama-antioxidants kanye nomthamo onempilo we-glitter esikhundleni sepulasitiki. Umkhiqizo ukuqinisekisile ukuthi i-glitter yawo ingu-100% ebolayo, isuselwa ku-lignocellulose, futhi ihlolwe ngokuzimela ukuthi yehliswa yini emanzini amasha, amanzi anosawoti, kanye nenhlabathi, ngakho-ke izwa kamnandi uma ifakwe esikhwameni solwandle.
Uma ufuna ukulungisela izinzipho zakho eholidini, cabanga ukusebenzisa ikhithi entsha yeholide kusuka kunhlobo yokunakekelwa kwezipikili ehlanzekile yeNailtopia. Njengoba umkhiqizo ukuqinisekisile, wonke ama-glitter asetshenziswe kule mibala ye-edishini ekhawulelwe angama-100% abolayo futhi awanayo ipulasitiki. Ngiyethemba lezi zithunzi ezicwazimulayo ziba yinto ehlala njalo kuhlu lomkhiqizo.